संकाय र स्टाफ अभिलेखागार »होज विश्वविद्यालय
श्रेणी: संकाय र स्टाफ
शैक्षिक मामिलाको वरिष्ठ VP को नयाँ नियुक्ति
शैक्षिक, परिसर जीवन, संकाय र स्टाफ
बधाई छ मेरी कोलिन्स! होज्सलाई शैक्षिक मामिलाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त गरे डा। मेरी कोलिन्सलाई होज विश्वविद्यालयको शैक्षिक मामिलाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ। यस स्थितिमा, उनले विश्वविद्यालयको शैक्षिक पक्षहरूको निरीक्षण गर्न मद्दत गर्दछ, हालको पाठ्यक्रम र डिग्रीहरूको विकास र कार्यान्वयन सहित, नयाँ सुरु गर्नका साथै […]	थप पढ्नुहोस्
भेडा भेडा AVP विद्यार्थी वित्तीय सेवामा पदोन्नति
परिसर जीवन, संकाय र स्टाफ
पदोन्नतिमा बधाई छ, नूह! नूह भेडा होमजेस विश्वविद्यालयमा छात्र वित्तीय सेवा को सहायक उपाध्यक्ष पदोन्नती। यस स्थितिमा, नूहले वित्तीय वित्तीय सेवाहरू, अनुभवीहरूको सेवाहरू, सहयोगी अपरेसनहरू र प्राप्य खाताहरू सहित विद्यार्थी वित्तीय सेवाहरूको सबै कार्यहरूको निर्देशन दिन्छ। आफ्नो पदोन्नति अघि, उनी विद्यार्थी खाता सेवा र सहायक अपरेसनका निर्देशक थिए [...]	थप पढ्नुहोस्
जो टर्नर नयाँ छात्र नेटवर्किंग प्रमुख
स्वागत छ, जो टर्नर! हामी तपाईंसँग उत्साहित छौं। टर्नर नामकरण वरिष्ठ मार्केटि and र एचजिज युनिवर्सिटीमा पूर्व छात्र सामग्री क्रिएटर अप्रिल १०, २०१– - नेपल्स / फोर्ट माइयर्स, एफएलए - जो टर्नर होज्स विश्वविद्यालयमा वरिष्ठ मार्केटिंग र पूर्व छात्र सामग्री क्रिएटरको रूपमा फर्केका छन्। यस स्थितिमा, ऊ विश्वविद्यालयको पूर्व सम्बन्ध सम्बन्धी पहलहरूको रेखदेखको लागि जिम्मेवार छ, सृजनाको अतिरिक्त […]
Zamniak साझेदारी विकास संपर्क नामित
नयाँ स्थितिमा बधाई छ, मिशेल! मिशेल जम्नियाकलाई होज्स विश्वविद्यालयमा साझेदारी विकास सम्पर्क नाम दिइयो। साझेदारी विकास स्थितिमा, मिशेल जामनियाक विश्वविद्यालयको लागि विद्यमान सामुदायिक साझेदारी बढाउन र नयाँ विकासको लागि जिम्मेवार छन्। उनी दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा क्षेत्रमा धेरै संस्थाहरूसँग काम गरिरहेकी छन्, साथै क्षेत्र हाई स्कूलहरू, कर्पोरेसनहरू, सरकारी [...]	थप पढ्नुहोस्
लुजिक नामांकन प्रबन्धको AVP को रूपमा होज विश्वविद्यालयमा सम्मिलित हुन्छ
Hodges U, Branislav मा स्वागत छ! ब्रानिस्लाव लुजिक नामांकन व्यवस्थापनका सहायक उपाध्यक्षका नामले यस स्थानमा, ब्रानिस्लाव लोजिकले प्रवेश, पहिलो प्रभाव र विद्यार्थी अनुभव टोलीहरूको निरीक्षण गर्दछ। उनले युनिभर्सिटीको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ती र आउटरीच विकास गर्न जारी राख्नेछन्। उसले विद्यार्थी भर्ती र भर्नामा १० बर्ष भन्दा बढीको विशेषज्ञता ल्याउँछ। अघि [...]	थप पढ्नुहोस्
स्वागत छ, Chris MacNeil
होज विश्वविद्यालय, क्रिस म्याकनिलमा स्वागत छ! क्रिस म्याकनेल फोर्ट माइर्स क्याम्पसमा भर्ना निर्देशकको रूपमा होज विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका छन्। यस स्थितिमा, उनी विश्वविद्यालयको फोर्ट मायर्स क्याम्पसमा आधारित भर्ना टीमहरूको निरीक्षण गर्नेछन्। क्रिसले भर्ना लक्ष्यहरू स्थापना गर्नुका साथै भर्ना प्रतिनिधिहरूलाई निरन्तर विकास र प्रशिक्षण दिनेछ। क्रिस [...]	थप पढ्नुहोस्
एरेनास होज विश्वविद्यालयमा वरिष्ठ रचनात्मक डिजाइनरको रूपमा सामिल हुन्छन्
होज्ज विश्वविद्यालय, स्यान्टियागो एरेनासमा तपाईंलाई स्वागत छ! मार्च १२, २०१– - नेपल्स / फोर्ट माइयर्स, एफएलए - स्यान्टियागो एरेनाज होज्स विश्वविद्यालयमा मार्केटिंग सामग्रीको वरिष्ठ रचनात्मक डिजाइनरको रूपमा सामेल भए। यस स्थितिमा, स्यान्टियागो सबै विश्वविद्यालय ब्रान्डि and र डिजाइन सिर्जना गर्न, र विश्वविद्यालय मार्केटि materials सामग्रीको डिजाइन र उत्पादनको निरीक्षण गर्न जिम्मेवार हुनेछन्। Arenas ले पनि सहयोग गर्नेछ [...]	थप पढ्नुहोस्
ट्रेडिंग स्पेस - # माइहोडजेस्टरी एक जना प्रोफेसर कसरी वाल स्ट्रीटमा लगानीबाट कक्षाकोठामा लगानी गर्ने अर्नोल्ड मियामोटोले स्पेक्ट्रमको विपरित छेउमा जीवन अनुभव गरेका छन्। लगभग years० बर्ष वाल स्ट्रिट वित्तमा डुबेको, उसले विश्वमा एकै पटकमा 30०+ मानिसलाई ब्यबस्थित गर्यो, बैंकमा लगानी बैंकि arms्ग हतियारहरूको लागि काम गर्दै [...]	थप पढ्नुहोस्
यी सबै वर्षहरु पछि एक जोडी अrac्गाल्ने
यी सबै बर्ष पछि उत्कटता अपनाउने - डा। डोलोर्स "डि" बाटियाटो परिचय गर्दै डा डोलोरेस "डी" बटाटियोले कक्षाकोठालाई माया गर्छिन्, र उनको उत्कटताले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई निर्देशन, संलग्न र प्रोत्साहित गर्ने छ। होज्स युनिवर्सिटीमा प्रोफेसर र व्यवस्थापन अध्यक्षको रूपमा, उनीले विद्यार्थीहरुलाई व्यवस्थापन पेशेवरहरुमा परिवर्तन गर्न के लिन्छ भनेर बुझ्छिन् र उनीहरूलाई भन्छिन्, "यो [...]	थप पढ्नुहोस्